Isitudiyo esitsha sokuhlala ixesha elifutshane, ukuzonwabisa, ubuchwephesha - I-Airbnb
Isitudiyo esitsha sokuhlala ixesha elifutshane, ukuzonwabisa, ubuchwephesha
Isitudiyo esikhulu esitofotofo kwaye esithambileyo sangoku kunye nekhitshi entsha kraca.
Umandlalo weKumkani umandlalo obalaseleyo (inokuba ziibhedi zomntu omnye), igumbi lokuhlambela labucala Ishawa yaseTaliyane
Indawo yasezilalini, kufutshane nombindi weLiege (15 min)
ukusuka kwi-Spa Francorchamps (imizuzu eyi-20)
ukusuka eSart-Tilman (i-10 min) kunye nesango lase-Ardennes.
Iparadesi yabakhweli beebhayisikile nabahambi ngeenyawo
Ukungena okuzimeleyo - indawo yokupaka-Terrasse-BBQ
Nespresso, ifriji, microwave, TV, wifi
Iindawo zokutyela, iivenkile ezikwi-500 m
Kuthethwa isiNgesi nesiDatshi
Isitudiyo sinomnyango owahlukileyo onebhokisi ephambili yokufika emva kwexesha ukuba kuyimfuneko.
Ilinen yokulala kunye neetawuli simahla onazo.
Ibhedi kunye nebhafu yomntwana inokwenzeka.
50" HDTV ene-intambo yepremiyamu, I-Apple TV, I-Netflix, I-Amazon Prime Video, I-Chromecast
4.94 · Izimvo eziyi-322
Le Pré Vert" ibekwe eBeaufays, kwiPhondo laseLiège, eBelgium. Indawo ilungile njengoko ikwindawo yokuhlala ezolileyo ngelixa ihleli kufutshane neevenkile zokutyela kunye neevenkile. Ukongeza, kwindawo ekufutshane, uya kuba nakho. kwakhona babe nethuba lokutyelela iiBhafu of Chaudfontaine kunye Spa.
Lo mmandla ukwadume kakhulu ngokukhwela intaba kunye nokukhwela ibhayisekile (Liège-Bastogne-Liège / La Roche-Aux-Faucons / La Côte des Forges / La Redoute).
IBeaufays yimizuzu eli-15 kuphela ngemoto ukusuka kwiziko laseLiege, imizuzu engama-30 ukusuka eMaastricht, imizuzu engama-40 ukusuka eAachen kunye nemizuzu engama-45 ukusuka eLuxembourg.
Ndisesandleni sakho ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Kuya kuba mnandi ukukwazisa ngeedilesi ezilungileyo, zokupheka, inkcubeko, imidlalo, intlalontle okanye nasiphi na esinye isicelo. Ungalibazisi, ndiyakwazi ukuqhagamshelwa bukhoma, ngefowuni okanye nge-app.
Ndisesandleni sakho ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Kuya kuba mnandi ukukwazisa ngeedilesi ezilungileyo, zokupheka, inkcubeko, imidlalo, intlalontle okanye nasiphi na esinye i…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Beaufays